Fastener Factory, Alaab -qeybiyeyaasha - Shiinaha Fastener -saareyaasha
Adeegga taageeraya nooc kasta oo xirayaasha
Fastener waa magaca guud ee nooc ka mid ah qaybo farsamo oo loo isticmaalo in lagu xidho oo lagu xiro laba ama in ka badan (ama qaybo) guud ahaan. Sidoo kale loo yaqaan qaybaha caadiga ah ee suuqa. Sida caadiga ah waxaa ku jira 12 nooc oo qaybood oo soo socda: Booladaha, baloogyada, boolal, lowska, boolal is -garaacis ah, boolal alwaax, maydhayaal, siddooyinkii xafidaya, biinanka, rivets, shirarka iyo lammaane isku xira, ciddiyaha alxanka. (1) Bolt: nooc ka mid ah dhejiyaha oo ka kooban madaxa iyo fur (dhululubo leh dun dibadda ah), oo u baahan in la is waafajiyo w ...
Adeegga is -hagaajinta ee OEM ODM
Bolt -ku -xirnaanta qaab -dhismeedka birta waa hab isku -xir oo isku xira in ka badan laba qaybood oo ah qaab -dhismeed bir ah ama qaybo hal boolal ah. Xiriirinta Bolt waa habka ugu fudud ee isku xirka qeybta hore iyo rakibidda qaab dhismeedka. Xiriirka la xiray waa kan ugu horreeya ee loo adeegsado rakibidda qaab -dhismeedka birta. Dabayaaqadii 1930 -meeyadii, isku -xidhka boodhka ayaa si tartiib -tartiib ah loogu beddelay isku -xidhka rivet, kaas oo loo adeegsaday oo keliya cabbir ku -hagaajin ku -meel -gaar ah oo ka mid ah isu -geynta qaybaha. Xir bool adag
Dhammaan taxanaha habaynta fur
Darajada wax -qabadka boolku waxay ka kooban tahay laba qaybood oo tirooyin ah, kuwaas oo siday u kala horreeyaan u matalaya xoogga gilgilashada magaca ee boollada iyo saamiga dhalidda ee maaddada. Tusaale ahaan, macnaha boolal leh darajada wax -qabad ee 4.6 waa: tirada qaybta hore (4 ee 4.6) waa 1/100 ee xoogga gilgilka magacaaban (n / mm2) ee alaab bool, taasi waa, Fu ≥ 400N / mm2; Tirada qaybta labaad (6 ee 4.6) waa 10 jeer saamiga wax -soo -saarka ee maaddada bolt, taas oo ah, FY / Fu = 0.6; Alaabta ...
Adeeg hal joogsi ah oo loogu talagalay dhejiyeyaasha
Maadooyinka ayaa si weyn loo adeegsadaa, laga bilaabo diyaaradaha iyo baabuurta ilaa tuubooyinka biyaha iyo gaaska loo isticmaalo nolol maalmeedkeena. Marar badan, mawduucyada intooda badani waxay ciyaaraan doorka isku xidhka, waxaana ku xiga gudbinta xoogga iyo dhaqdhaqaaqa. Waxa kale oo jira mawduucyo ujeedo gaar ah leh. In kasta oo ay jiraan noocyo badan, haddana tiradooda way xadidan tahay. Isticmaalka mudada dheer ee dunta ayaa sabab u ah qaab-dhismeedkiisa fudud, wax-qabad lagu kalsoonaan karo, kala-tagis habboon iyo soo-saaris fudud, taas oo ka dhigaysa mid aan laga maarmi karin ...
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Boolal, Guga Saxanka, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Aluminium CNC Qaybo Machined, Sheet Birta Stamping Products, Dhimashada Magnesium, Dhammaan Alaabta